Maxaa Khaldan: Caymiska gaadiidka (auto insurance) Somaliland? | Qaran News
Writen by Qaran News | 1:34 pm 19th Sep, 2021
Bilihii u danbeeyey waxaa socday dedaalo uu hormood ka ahaa Gudoomiyaha Hay’ada Caymiska Somaliland, Saleebaan Bukhaari, taas oo la doonayey in khasab lagaga dhigo gaadiidlayda dalku inay yeeshaan caymis (auto insurance). Hadaba waxaynu halkan u eegi doonaa sida khaldan ee Gudoomiyaha Hay’ada Caymisku isugu dayey in si “fool erin” ah uu u hirgaliyo hawshan, caqabadaha waajahaya mustaqbalka dhow iyo sida loo waajihi karo.
Ka dib markii Golayaasha xeer dejinta ay ansixyeen Xeerka Hay’ada Caymiska (Xeer Lr. 92/2021), ayaa madaxweynuhu wareegto ku magacaabay Gudoomiyaha iyo Agaasimaha Guud ee Hay’ada. Halkaa markay marayso waxay ahayd in la curiyo Xeerka Caymiska kaas oo sifo sharci u yeelaya, faahfaahina ka bixinaya waxyaalaha ay ka mid ka yihiin waajibaadka iyo xuquuqda cida la caymiyey (insured person/entity) iyo cida caymisay (the insurer). Ta labaad waxay ahayd in la magacaabo dhismaha Guddida Caymiska Qaranka (The National Insurance Board of Directors) ee xeerku sheegay. Intaa midna lama yeelin ee Gudoomiyihii Hay’ada ayaa soo saaray wareegto uu ku waajibinayo caymiska gaadiidka. Arintani waxay dhalisay guux iyo buuq aad u badan oo ka soo yeedhaya gaadiidlayda oo ay hormoood ka yihiin ganacsatada haysata macdaarada gaadiidka. Markii ganacsatadii macraarada iyo Gudoomiyihii Hay’adu ay waxba isku af-garan waayeen, waxay ganacsatadu dacwad u gudbiyeen Golaha Wakiilada oo guddi soo baadha u saaray arinkan. Maxaa dhacay hadaba?
Maalin ka hor intaan gudidii Golaha Wakiiladu u saaray baadhida arinkani la kulmin Gudoomiyaha Hay’ada Caymiska ayaa Madaxweyne Biixi soo saaray 18/9/2021 waraaq uu ku magacaabayo Gudida Caymiska Qaranka (National Insurance Board). Waraaqdu waxay muujinaysaa in Saleebaan Bukhaari, Gudoomiyihii Hay’ada Caymiska ee soo saaray warqada waajibinaysa caymiska gaadiidku uu yahay kaliya xubin ka tirsan Gudida Caymiska Qaran oo aanu xataa Gudoomiye u ahayn. Waxaa is waydiin leh markaa sidii ayaa xubin Gudida Caymiska ka mid ahi go’aanka saamaynta intaa leh u qaadan kartaa iyadoo aanay la ogayn Gudoomiyaha Gudida iyo xubnihii kale oo aan xiligaa magacownayniba. Waxaa intaas ka sii daran, in Maxkamada Sare soo saartay go’aan degdeg ah oo ay ku sharciyeynayso caymiska gaadiidka isla maalintii (18/9/202) madaxweynuhu magacaabay Gudida Caymiska.
Magacaabida madaxweynaha iyo go’aanka Maxkamada Sare labaduba waxay u muuqdaan in lagaga hortagayo baadhitaanka gudida Golaha Wakiilada ee ka jawaabaysay cabashada ganacsatada macdaarada gaadiidka, isla markaana gabood sharci loogu samaynayo Gudoomiyaha Hay’ada Caymiska oo xadgudub iyo ilduuf sharci oo badan sameeyey. Inagoo ay tahay inaynu ixtiraamno go’aanada Maxkamada Sare, haddana waxaan rajaynayaa inay maxkamadu dib u jaleecdo (Review) go’aankeeda iyadoo tix galinaysa si gaar ahna u fiirinaysa:
1) Caymisku (insurance) inuu waafaqsan yahay Shareecada Islaamka oo Qodobka 5aad ee dastuurka Somaliland waajibinayo inay xeerarka dalku waafaqaan maadaama uu ku fadhiyo caymisku baycul qarar بيع الغرر oo xaaraan ah
2) Inay lagama maarmaan tahay in la curiyo xeerka caymiska kaas oo sheegaya inay khasab tahay qaadashada caymiska iyo inuu ikhtiyaar yahay
3) Inay sharci tahay go’aanka lagu waajibinayo caymiska gaadiidka ee uu soo saaray xubin ka mid ah Gudida Caymiska oo aan xitaa Gudoomiyahay Gudidu ka war hayn
Si kasta oo ay u dhacdo, waxaan ku boorinayaa in Golaha Wakiiladu ka doodo nooca caymiska ee dalka laga hirgalin karo, xeerna ka soo saaraan.